Crab Salad Recipe: metal classical plus labapheki fancy
Lokhu dish ingalungiswa kalula futhi ngokushesha kakhulu - kodwa, noma kunjalo, akwenzi kube lula kakhulu noma lasekuqaleni. Crab isaladi ne amaqanda nezinye izithako nokusebenza ngokwanele abanekhono ezingenza abe wobuciko ngempela, kumane kubonisa ukuthi sekuyinto ngakho adume - futhi kude lé nemingcele yezwe lakubo.
Salad nge crab inyama kuyahluka obucayi, ukunambitheka kancane elimnandi, ukwakheka yasekuqaleni, okuyinto bambalwa abantu bangahlala ngabandayo. Ukuze ukudla kwansuku noma ithebula zemikhosi - crab isaladi iresiphi kufanelekile noma yisiphi isimo, ikakhulukazi ngenxa ekuwulungiseleleni ithatha akukho ngaphezu ngekota yehora, ingasaphathwa ngisho iqoqo ubuncane imikhiqizo - crab inyama noma crab izinti, corn kanye amaqanda.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukunambitheka isaladi elinjalo elimangalisayo luncike kanjani fake usike inyama ngeke ukupheka nquma amaqanda ngokuyinhloko. Kungakhathaliseki ukuthi la imikhiqizo uthathe ezincane, ezinkulu noma natrut yashizi - incike ukuzimisela umuntu silungiselela isaladi. Ungase futhi izame flavour, unezela onion isidlo - njalo oqoshiwe, irayisi kanye ukhukhamba zicwiliswe kanye iklabishi fresh. Ngokuvamile, akukho isiqondiso eyodwa okuqondile kwendlela abangakwenza ngayo ukulungiselela ilungelo crab isaladi - konke kuncike umcabango umpheki, ezithandwa nguye nokunambitheka okungefani. Omunye angase ngisho ingasetshenziswa njengendlela umkhiqizo eziyisisekelo ham, ushizi notamatisi fresh - zingase zishintshe kakhulu ngaphandle crab inyama namaqanda zonke nezinye izithako.
Recipe crab isaladi - Classic (okuyinto ngesisekelo zonke) noma yimuphi omunye uhlala adume - hhayi indima okungenani kule kuyinto ukunambitheka ezithakazelisayo amnandi, okuyinto isici esiyinhloko le isilovela, akufanele ishintshwe. Uma namanje cha beqiniseka ukuthi ungakwazi ukufezekisa lokhu masinyane ngamathalenta azo siqu, ukusebenzisa iziqondiso ezilandelayo ezisiza ukuba apheke esiphundu futhi isaladi okusheshayo. Lokhu kudinga: crab inyama izinti noma (200.), Corn walondoloza (200.), Amaqanda (4 nama-PC.) Futhi imayonnaise (150 ml.). Into yokuqala ukupheka amaqanda - uma uwafake ngamanzi abandayo, inqubo ke ukupheka kuthatha imizuzu engaphansi kwengu-10 ngemva abilayo, futhi uma wehlise kubo ngqo amanzi abilayo, ke kuyodingeka ulinde ngekota yehora. Ngalesi sikhathi ungakwazi onga corn okusemathinini emanzini, wafaka le amabele endishini enhle, bese uthumela ku okufanayo oqoshiwe crab izinti. Lapho Amaqanda ngamathumba, kufanele futhi kube epholile futhi nquma. Ngaphezu kwalokho, zonke izithako enikezela isaladi recipe crab, kuxutshwe kahle endishini isaladi ngagqoka ne imayonnaise. kamuva Imizuzu eyishumi nanhlanu, lapho ukumnika isaladi, kungasilethela etafuleni.
Ngifuna into ngokucace nakakhulu futhi original. Ungakwazi ukulungiselela isidlo esimnandi ne ukwengeza utamatisi. Ngoba kudingeka crab okusemathinini (200.), Utamatisi (3 PC.), Onion (2 sekugcineni.), Futhi amakhowe (150 g.) Futhi zonke izinhlobo amakhambi. Ngaphezu kwalokho, lokhu kufanele eceleni ukulungiselela isilovela usoso, okuyizinto ezidingekayo ukuze ulamula (2 PC.), Uwoyela Vegetable (30 ml.), White iwayini (150 ml.) Futhi izinongo. Leresiphi kusho crab isaladi ukudla ukulungiselela umzimba omkhulu kuyafana kule nguqulo classical - zonke izithako yilezi phansi ngokucophelela (Kubaluleke kakhulu ukususa kuqala kusuka utamatisi ikhasi) kanye okuxubile endishini isaladi. Ukudala usoso, in a blender ugaye anyanisi ngamafutha yemifino, iwayini kanye kalamula, kanye nezinongo eziyisisekelo - pepper kanye nosawoti. Khona-ke yonke into ilula - isaladi begqoke nge sauce futhi sathunyelwa endaweni epholile. kamuva Imizuzu eyishumi nanhlanu, lapho ukumnika crab isaladi, kungaba wethulwe bonke labo abafisa ukuba siqonde amakhono akho Culinary.
Salad "Nicoise": iresiphi zakudala ngesithombe
Salad nge croutons - fast and original kakhulu
Salad inkukhu nge uphayinaphu: zabuna esihlwabusayo
Indlela ukupheka yenkomo sikadali
Njengesevisi ye-MTS "Ukukhokha okulula" ukuxhuma kwikhabhinethi yomuntu siqu. Incazelo yenkonzo "Ukukhokha okulula" nokubuyekezwa
Granulated cottage shizi. Izakhiwo kanye zokupheka
Nail ukhunta: izici zokwelapha kanye nokwelashwa
Ifayela Cadastral: sici nezinqubomgomo
Cream "Sustarad": ukubuyekezwa kanye Isicelo
Thymus e abadala
Indlela yokudweba udlunkulu
Njengoba Onjiniyela bhala "VKontakte" futhi ngendlela efanele ukukhipha isicelo
Glikodin: umphumela kuyadida